काठमाडौं १४ कात्तिक: छानबिन समितिले सामान खरिदमा करोडौँ रुपैयाँ घोटाला गरेको ठहर्‍याउँदै खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसादलगायत पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । घोटालाकै कारण संस्थानलाई २५ करोड रुपैयाँ घाटा भएको समितिको निष्कर्ष छ। अनियमित खरिदमा महाप्रबन्धक प्रसाद, उपप्रबन्धक ईश्वर प्रसाद, बुटवल शाखाका कामु ..
काठमाडौँ, १३ कार्तिक । छातीमा संक्रमणसँगै श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएक..
हेटौँडा, १० कात्तिक । प्रदेश ३ सरकारले चालक अनुमति प्राप्त गर्न कक्षा ८ उत्तीर्ण भएको हुनु..
काठमाडौं, १० कात्तिक । चालू आर्थिक वर्ष पाँच अर्ब ७० करोड ५६ लाख ७० करोड ५६ लाख मूल्यको सा..
महेन्द्रनगर, १० कात्तिक । छोरीको हत्यारा पत्ता लाग्ने र न्याय पाउने आस मर्दै गएको छ,’ बलात..
इटहरी, १० कात्तिक । गत बुधबार साँझ इटहरी वडा नम्बर १० की एक बालिका घरनजिकै नृत्य ९डान्स० सिक्न गइन् । नृत्य सिक्न अरु साथी पनि भेला भइसकेका थिए । दसैंअघिदेखि नै स्थनीय राज क्ल्बले तिहारका लागि नृत्य सिकाउन थालेको थियो । त्यो दिन सहभागी बसैजना नृत्य सिक्न थाले । नृत्य गरिरहेका बेला सिकाउने गुरुले ती […]
डोल्पा, १० कात्तिक । नगर क्षेत्रको विकास कार्यमा प्रयोग गर्ने भन्दै महँगो मूल्यमा यहाँको एक नगरपालिकाले खरिद गरेको डोजर जनप्रतिनिधिको कमाई खाने भाँडो बनेको छ । त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले आन्तरिक विकास आयोजनाको काम गर्ने भनेर एक करोडमा खरिद गरेको हुन्डाई कम्पनीको डोजर जनप्रतिनिधिको तलब खाने माध्यम बनेको हो । प्रदेश सरकारले स्थान..
सडकले जोडिँदै नेपाल-सिक्किम
पाँचथर, ८ कात्तिक । नेपालसँग स्थलमार्गबाट जोडिन सिक्किम सरकारले सडक निर्माण तीव्र पारेको छ । सिक्किम सरकारले नेपाल भारत सिमाना चिवाभन्ज्याङसम्म सडक निर्माणको काम अघि बढाएको हो । डिसेम्बरसम्म यो सडक निर्माण सक्ने योजना छ । नागरिक दैनिकबाट
काठमाडौं, ८ कात्तिक । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको अवधिमा विकास बजेट खर्च अत्यन्तै न्यून रहेको छ । यस अवधिमा महिनाको २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आवको पहिलो तीन महिनामा पुँजीगत बजेटतर्फ जम्मा १७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भयो । यो [..
काठमाडौं, ८ कात्तिक । संघीय समाजवादी फोरमले सम्हालेका दुवै मन्त्रालयका सचिव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा पुष्पा चौधरी र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा तानिएका हुन् । मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव र सहर..
काठमाडौं, ७ कात्तिक । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताको चर्को बार्गेनिङुका कारण नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) उपकुलपतिविहीन बनेको छ । आफू निकटकालाई नियुक्त गर्न नेकपाका नेताको जोडबल बढेसँगै उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिन थालेको हो । नास्ट विगत डेढ महिनायता उपकुलपतिविहीन छ । यसअघिका उ..
नयाँदिल्ली,७ कात्तिक । आकर्षक तलब सुविधासहितको प्रलोभन दिएर खाडी मुलुक पुर्याइदिने भन्दै नयाँदिल्लीमा बन्धक बनाइएका २८ नेपाली युवतीको उद्धार गरिएको छ । नयाँदिल्लीको इन्द्रपुरमस्थित अभय खण्डको सिर्जन विहार सोसाइटीको दुईवटा फ्ल्याटमा बन्धक बनाइएका उनीहरुको सोमबार स्थानीय प्रहरीले उद्धार गरेको हो । २१ देखि ४५ बर्ष उमेरका ती नेपाली ..
काठमाडौं, ७ कात्तिक । कर्जाको बढ्दो मागको तुलनामा बैंकले पर्याप्त निक्षेप संकलन गर्न नसक्दा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुन थालेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको कर्जा, निक्षेप तथा पुँजी अनुपात ९सीडीसी०मा दबाब देखिएको छ । ‘मंगलबारसम्म १० भन्दा बढी बैंकको सीडीसी अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘यद्यपि व..
काठमाडौं, ७ कात्तिक । नेपाल प्रहरीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा पठाउने महिला प्रहरीको संख्या बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । फर्म्ड पुलिस युनिट ९एफपियु० शान्ति मिसनअन्तर्गत कुल संख्यामध्ये २० प्रतिशत महिला प्रहरी पठाउने भएको छ । प्रहरीले बनाएको एफपियु छनोट कार्यदेश २०७५ मा दुई जुनियर अधिकृतसहित हरेक एफपियु टोलीमा कम्तीमा..
जाने होईन त रारा घुम्न ?
मुगु, ७ कात्तिक । राारामा पर्यटकीय चहलपहल सुरु भएको छ । असोजदेखि मंसिरसम्म रारा अवलोकन गर्न उपयुक्त मानिन्छ । हावापानी अनुकूल र आसपासका प्राकृतिक सम्पदाको दृश्यावलोकन गर्न सजिलो हुने भएकाले यो मौसम पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको हो । सडक अवरुद्ध भएपछि असारदेखि भदौसम्म सुनसान रारामा अहिले पर्यटकको चहलपहल बढ्दै गएको छ । हवाई उडान नि..
काठमाडौं, ६ कात्तिक । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक निर्धारित मितिमा हुनेमा केन्द्रीय सदस्यहरुले आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन् । केन्द्रीय समिति बैठक नै अनिश्चित भएको भन्दै उनीहरुले यस्तो आशंका व्यक्त गरेक छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले नेविसंघमा ३२ बर्षे उमेर हद बहुमतका आधारमा पारित गरेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष..
काठमाडौं ६ कात्तिक । स्मार्ट कार्ड (सवारीचालक अनुमतिपत्र) मंगलबारदेखि निजी कम्पनीले समेत छाप्ने भएको छ । पहिलो दिनदेखि नै निजी कम्पनीले दैनिक २० हजारभन्दा बढी स्मार्ट कार्ड छाप्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले पर्याप्त स्मार्ट कार्ड छाप्न नसकेपछि निजी कम्पनीलाई छपाइको अनुमति दिइएको विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले ..
काठमाडौं ६ कात्तिक । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का केन्द्रीय सदस्यहरुले नै पार्टीको विधानबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् । अध्यक्ष मण्डलका शीर्ष नेताहरुबीच आपसी छलफल भई निर्वाचन आयोगमा पठाइएको सो विधान आफूहरुलाई भने उपलब्ध नगराइएको पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुले बताएका छन् । राजपाले आगामी वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ । ..
कपिलवस्तु, ५ कात्तिक दुर्गा भवानीको मूर्ति सेलाउने क्रममा कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा विवाद हँुदा कपिलवस्तु प्रशासनले लगाएको कफ्र्यु बिहानदेखि आज दिनको १२ बजेसम्मका लागि हटाएको छ । कफ्र्यु हटेसगैँ जिल्लाको जनजीवन सामान्य हुँदै गएको छ । शुक्रबारदेखि कृष्णनगर तनावग्रस्त बनेको थियो । विवाद तीन दिनसम्म पनि साम्य नभएपछि स्थिति नियन्त्रणम..
निर्मला हत्या प्रकरण : विष्ट र भट्ट बर्खास्त प्रक्रियामा, २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधियो
कात्तिक ५, काठमाडौं गृह मन्त्रालयले कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटना छानबिनमा गम्भीर लापरबाही गरेको आरोप लागेका एसपी डिल्लीराज विष्ट र इन्सपेक्टर जगदीश भट्टको बर्खास्त प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिक लेख्छ–प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिस र छानबिन समितिको सुझावको आधारमा गृहले आइतबार २४ घण्टे ..
अस्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीलाई अवार्ड
कात्तिक ५, अस्ट्रेलिया दक्षिण अस्ट्रेलियाको फिल्न्डर्स युनिभर्सिटीका नेपाली विद्यार्थी हिमाल कँडेलले यहाँको शैक्षिक क्षेत्रमा प्रदान गरिने दुई उत्कृष्ट अवार्ड पाएका छन् । यहाँका सबै विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीमध्ये उत्कृष्टलाई दिइने ‘इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट अफ द इयर’ अवार्ड र विद्यावारिधि गरिरहेका विद्यार्थीलाई अनुस..
वनको कार्यक्षेत्र खुम्चियो
कात्तिक ५, काठमाडौं जिम्मेवारी जिल्लाभरिकै वन हेर्ने तर कार्यक्षेत्र जम्मा ५ वटा वडा । सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ । डिभिजन वन कार्यालय, मनाङ भने यसैमा अभ्यस्त भइसकेको छ । डिभिजनले नासोङ गाउँपालिकाका १, २, ५, ६ र ७ वडाका वन मात्र व्यवस्थापन गर्छ । जिल्लामा चारवटा गाउँपालिका छन्– चामे, नासोङ, नार्फू र नेस्याङ । नासोङका […]
तिहारअघि नै दस राजदूत नियुक्ति, क-कसको सम्भावना ?
काठमाडौं, ५ कात्तिक । सरकारले १० कुटनीतिक नियोगमा राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । लामो समयदेखि रिक्त ४ र अब खाली हुन लागेका ६ कुटनीतिक नियोगमा एकैसाथ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवारको रोस्टर तयार पार्दै छौं, त्यो सकिनासाथ प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरी क्याबि..
सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग
जुम्ला, ५ कात्तिक । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको ओपिडी भवनमा भएको आगजनी र प्रसिद्ध धार्मिकस्थल चन्दननाथ मन्दिरको मूर्ति चोरीका विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जुम्लावासीले माग गरेका छन् । जुम्ला सदरमुकाममै रहेको चन्दननाथ मन्दिरबाट १२ मंसिर ०७३ को रात..
नयाँ कानुनसँगै सम्बन्धविच्छेदमा पुरुष अघि
काठमाडौं, ५ कात्तिक । सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतमा निवेदन दिनेमा महिलाभन्दा पुरुष बढी देखिएका छन्। १ भदौयता काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ९८ जना पुरुषले पत्नीसँग छुट्टिन निवेदन दिए। त्यस अवधिमा अदालत पुग्ने महिला ८७ मात्रै छन्। डेढ महिनामा महिला र पुरुष दुवै गरी एक सय ८५ जनाले पारपाचुकेका लागि अदालतको ढोका ढक्ढकाएका हुन्। दैनिक आठ-नौ..
काठमाडौँ, २९ असोज । नेपाललाई चारवटा हवाई रुट थप्न असार पहिलो साता काठमाडौँमा सहमति जनाएको भारत त्यसबाट पछि हटेको छ । प्रस्तावित रुट सञ्चालनको विषय टुंग्याउन बुधबार नयाँ दिल्ली पुगेका पाँच नेपाली प्राविधिक सकारात्मक निर्णय नभएपछि स्वदेश फर्किएका छन् । ‘भारतीय प्राविधिकले डिफेन्स कारण देखाउँदै यसपटक निर्णय नै गरेनन्,’ बैठकमा सहभाग..
काठमाडौँ, २९ असोज । नेपाल र मलेसियाबीच दुई पक्षीय श्रम समझदारी कार्तिक १२ मा हस्ताक्षर हुने भएको छ । श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालका अनुसार समझादारीमा हस्ताक्षर गर्न मलेसियाका मान संसाधनमन्त्री कुला सेघरान आउनेछन् । यो समझदारी वैदेशिक रोजकारीको इतिहासमा कोसेढुंगा हुने दाहालले बताए । नेपालले जेठ २ देखि मलेसिया रोजगारीम..
काठमाडौँ, २९ असोज । सरकारद्वारा गठित छानविन समितिले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बिना स्वीकृति क्यानाडामा विश्व संस्कृत सम्मेलनमा सहभागी भएको ठहर गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवम् कुलपति केपी शर्मा ओलीले उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई विमानस्थलबाट जबर्जस्ती फर्काएपछि भ्रमण विवादीत बनेको थियो । विश्वविद्यालयकै पदाधिकारीले को..
असोज २८, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी समिति बैठक पटक–पटक सरेपछि एकीकरणसम्बन्धी बाँकी काम दसैँपछि धकेलिएको छ । गत २४ असोजका लागि डाकिएको सचिवालय बैठक २७ गते बस्ने गरी स्थगित गरिएकोमा नेताहरूको व्यस्तता र गृहकार्य अभाव जनाउँदै ४ कात्तिकमा सारिएसँगै नेकपाको एकीकरणसम्बन्धी बाँकी काम दसैँपछि..
लोकसेवाले विज्ञापन ननिकाल्ने !
असोज २८, काडमाडौं । लोकसेवा आयोगले कर्मचारी रिक्त दरबन्दी पूर्तीका लागि असोज अन्तिम साता नियमित विज्ञापन ननिकाल्ने भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया नै अगाडि नबढेकोले रिक्त दरबन्दी यकिन हुन नसक्दा आयोगको नियमित विज्ञापनमा असर परेको हो । आयोगले हरेक वर्ष असोजको अन्तिम हप्ता बुधबार विभिन्न सेवा समूह अन..